अनौठो परम्परा !जहाँ हुन्छ आफ्नै बाबुसँग छाेरीकाे बिहे – onlinedarpan:
Posted on December 30, 2018 December 30, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 263 Views
बुवा र छोरीबीचको नाता संसारमा निकै पवित्र नाता हो । बुवा र छोरीबीच बिहे हुने कुरा त हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ र यसो गर्नुलाई पाप ठान्छौँ ।
जस अनुसार यदि कुनै महिलाको बिहे भएको छोटो समयमै लोग्नेको मृत्यु भएमा विधवा महिलाले लोग्नेका परिवारका कुनै पुरुष सदस्सँगै बिहे गर्नुपर्दछ । भारत र बंगलादेशमा गरी मण्डी समुदायका २० लाख मानिस छन् । उनीहरुलाई गारो जातिका नामले पनि चिनिन्छ ।-
शरीरको कुन भागमा कोठी अाउदा के जनविश्वास छ ?
Posted on December 11, 2018 Author onlinedarpan
Share6 Tweet Google+ Pin0 6shares मानिसको छालामा आउने काला वा अन्य रंगका दानालाई कोठी भनिन्छ हामीले बुझ्ने कोठी भनेको छालालाई रङ्ग प्रदान गर्ने कोषिका एकै ठाउँमा थुप्रिएर रहने अवस्था हो । यसलाई अङ्ग्रेजीमा मोल निभ्स भनिन्छ । सामान्यतया शरीरको देखिने वा नदेखिने जुनसुकै भागमा कोठी आउन सक्छ ।यस्तो कोठी शरीरको कुन भागमा छ त्यसले सोही विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Posted on December 27, 2018 December 27, 2018 Author onlinedarpan
Share89 Tweet Google+ Pin0 89shares १. जो मानिसको साथमा ममतामयी आमा हुन्छिन्, ऊ कहिल्यै गरिब हुन सक्दैन । – अब्राहम लिंकन २. मलाई एक असल आमा देऊ, म तिमीलाई एक असल राष्ट्र दिनेछु । – नेपोलियन बोनापार्ट ३. आज मैले जती गरे यी सबैका लागि म मेरी आमा प्रती ऋणी छु । – जर्ज वासिंगटन विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
मेरो मरेको भाइको नाममा पैसा संकलन नगरिदिनुहोस्
यी सामान्य उपायले नयाँ वर्षमा तपाईँलाई स्वस्थ रहन सघाउनेछन्